Basikety sokajy N1 A 2019 Tompondakan’i Madagasikara ny ASB Itasy
Ny ekipan’ny ASB Itasy no voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara 2019 teo amin’ny taranja basikety lalaovin’olona 5 notontosaina tany Tsiroanomandidy.
Resin’izy ireo tamin’ny 72-59 ny ekipan’ny USF avy any Matsiatra Ambony teo amin’ny lalao famaranana notontosaina ny alahady 09 jona 2019 teo. Ny ekipan’ny TMBB Analamanga nandresy ny Mbc Atsinanana teo amin’ny lalao fiadian-toerana kosa no nitana ny laharana faha-3. Izy 3 voalohany ireo izany no miakatra ao amin’ny sokajy N1 A amin’ny taom-pilalaovana 2019/2020.
Ireo mpilalao nisongadina tamin’ny fifaninanana :
- Mpanazatra mendrika indrindra i Me Gerard (USF Matsiatra Ambony).
- Mpilalao mendrika indrindra i Fandrama Benoit Narcisse N°15 ASB Itasy
- Mpampidi-baolina mendriky ny dingana famaranana : TSILEFITRA Jernil Claude N°9 MBC Atsinanana (65 Points).